Fiber Optic Distribution Bhokisi Vagadziri | China Fiber Optic Distribution Bhokisi Fekitori & Vatengesi
Fiber Optical Distribution Bhokisi
Kuvhara kwakakombama kunopa nzvimbo uye kudzivirirwa kwefibre optic tambo kucheka uye kubatana. Vanogona kukwirwa zvemuchadenga, kuvigwa, kana kunyorera pasi pevhu. Izvo zvakagadzirirwa kunge zvisina mvura uye guruva chiratidzo. Inogona kushandiswa mukushisa kubva -40 ° C kusvika 85 ° C, inogona kugadzirisa 70 kusvika 106 kpa kumanikidza uye kesi yacho inowanzo gadzirwa neyakaomarara epurasitiki yekuvaka.
Mhando yeFibre Optic Distribution bhokisi rakagadzirwa chaizvo kuti rishandiswe mukati meFiber To The Home (FTTH) Passive Optical Networks (PON).
Fiber Distribution Bhokisi chigadzirwa chemakomputa, madziro kana pole inotakurika fiber yakavharirwa yekushandisa kwemukati nekunze. Izvo zvakagadzirirwa kuti zviiswe mu fiber network yekumisikidza poindi kuti ipe nyore mutengi kubatana. Mukubatana neakasiyana adapta yekutsika uye zvakapatsanurwa, ino sisitimu inopa yekupedzisira kushanduka.
Iyo midziyo inoshandiswa senzvimbo yekumisa ye feeder tambo yekubatana nedonhwe tambo muFTTx yekutaurirana network system. Iyo faibha kucheka,
kutsemura, kugovera kunogona kuitwa mubhokisi rino, uye panguva iyi inopa dziviriro yakasimba uye manejimendi kune iyo FTTx network chivakwa.
Fibre kuwana kugumiswa kuvharwa inokwanisa kubata
kusvika kune vanonyorera gumi nematanhatu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu uye makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekutsikisa sekuvhara.
Iyo inoshandiswa sekuvhara kwekutsiva uye nzvimbo yekumisa ye
iyo feeder tambo yekubatanidza pamwe nekudonha tambo muFTTx network system. Inobatanidza fiber splicing, kutsemura, kugovera, chengetedzo uye tambo yekubatanidza mune rimwe rakasimba dziviriro bhokisi.
Huawei Olt Mutengo, External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver, Huawei Qsfp +, Sfp C ++, Optical Fiber Module,